कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा यि बिद्यार्थीले लेख्न छाडेर बनाए टिकटक ! – AB Sansar
December 2, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा यि बिद्यार्थीले लेख्न छाडेर बनाए टिकटक !
काठमाडौँ । परिक्षा चलिरहेको थियो । तर परिक्षा अन्य समयमा जस्तो शान्त थिएन । परिक्षार्थीहरुले एकअर्काको कपी हेर्न र परिक्षा हल भित्रै टिकटक बनाउनमा ब्यस्त थिए । परिक्षा बोर्डको नियम अनुसार बिद्यार्थीले मोवाइल लगायतका सामाग्रीहरु केन्द्र भित्र लैजान प्रतिबन्ध गरेको भएता पनि दाङको एउटा परिक्षा केन्द्रको दृश्य फिल्म हलको जस्तो देखिन्थ्यो । स्रोतका अनुसार परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा बनाएको टिकटक भिडियो दाङको रहेको खुलेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय दाङका प्रमुख रामलाल खड्काका अनुसार त्यो भिडियो दाङकै एक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले बनाएको बताए । तर उक्त भिडियो अहिलेको नभएको यसअघि नै बनाएको र अहिले बाहिर आएको बताइएको छ ।
टिकटक भिडियो बाहिरिएपछि सम्बन्धित विद्यालयलाई पनि यस विषयमा स्पस्टीकरण सोधिसकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय दाङका प्रमुख रामलाल खड्काले जानकारी दिए । परीक्षा हलमा टिकटक भिडियो बाहिरिएपछि परीक्षाको मर्यादाप्रति आलोचना सुरु भएको छ ।
रोनाल्डो’ को ‘रोमान्स’ ले थपियो छावा